आज कती छ सुनको मुल्य ?
२०७७ असार ११ गते ११:५१
काठमाडौ,११ असार । आज (बिहिबार्) बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । बुधबार तोलामा ९१ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै बिहीबार छपावाल सुन छोलामा ९० हजार...
प्रचण्डले ओलीलाई बालुवाटार बैठकमै सत्ता छाड्न भनेपछि…
२०७७ असार ११ गते १०:२१
काठमाडौ,११ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ । पार्टी स्थायी कमिटि बैठक अगावै आफ्नो पल्लाभारी बनाउने एकपछि अर्को प्रयासमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्रियता देखाइरहेका छन् । उनले बैठक अगावै पटक पटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र...
२०७७ असार १० गते १६:२१
काठमाडौ,१० असार । दुईजनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उच्च सतर्कता अपनाउँदै मुख्य दुईवटा सडकबाहेक सबै सडक बन्द गर्ने भएको छ । नगरपालिकालको आज आकस्मिकरुपमा बसेको कार्यपालिका बैठकले लकडाउनलाई कडाइ गर्नुका साथै सडक, पसल पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर...
सुनको मूल्यमा वृद्धि,आज सुनको मूल्य तोलामा कती बढ्यो
२०७७ असार १० गते १५:४४
काठमाडौं, १० असार । बुधबार सुनको मूल्यले फेरी नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । छापावाला सुन तोलाको ९१ हजार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भइ सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । मंगलबार...
२०७७ असार १० गते १२:२४
काठमाडौ,१० असार । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेसँगै नेपाल संक्रमणको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाअनुसार सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागु गर्ने योजना बनाएको थियो । ऐनको...
चेतावनीसहित गोर्खा सैनिकबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस्तो बयान दिएपछि डरायो भारत
२०७७ असार १० गते ११:५१
काठमाडौं । प्रधानान्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको एक बयानका कारण तिल्मिलाएको भारत फेरि आक्रोशित भएको छ । उप–प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले लिपुलेक विवादमा बोलेको कुरा नेपालको इतिहासको अपमान भएको बताएसँगै भारत भड्केको हो । भर्खरै जनरल...
२०७७ असार १० गते ९:१२
काठमाडौ,१० असार । सरकारले काठमाडाैं उपत्यकामा नयाँ नियम लागु गरेकाे छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिएकाहरुलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा राख्न तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ । घरधनीले पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि...
रामदेवको कोरोना औषधिको विज्ञापनमा भारत सरकारले लगायो रोक
२०७७ असार १० गते ९:०१
एजेन्सी,१० असार । भारत सरकारको आयुष मन्त्रालयले बाबा रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडले कोभिड–१९ को औषधि भन्दै बजारमा ल्याएको ‘कोरोनिल’ को विज्ञापनमा रोक लगाएको छ। सञ्चार माध्यममा यसबारे समाचार आएपछि मन्त्रालयले यसबारेको वैज्ञानिक अध्ययन र सत्यताका बारेमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। तर पतञ्जलीका...
भर्खरै आयो यस्तो खबर : बाँकेमा कार दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु
२०७७ असार ९ गते २०:४१
बाँके, ९ असार । बाँकेमा आज कार दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा कारमा सवार नवलपरासी, कावासोती नगरपालिका—८ बस्ने २२ वर्षीय क्षितिजकुमार कुँवर र चितवन, भरतपुर महानगरपालिका—१२ निवासी ४१ वर्षीय कमलराज लम्सालको मृत्यु भएको प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले जानकारी दिए...
बाबा रामदेबले ल्याए कोरोनाको औषधी ! ७ दिनकै कोरोना ठिक हुने दाबी
२०७७ असार ९ गते १९:२९
काठमाडौं, ९ असार । भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले कोरोना भाइरसलाई शतप्रतिशत जित्ने औषधी तयार पारेको दाबी गरेको छ । आज (मंगलबार) पतञ्‍जली आयुर्वेदले पत्रकार सम्‍मेलनको आयोजना गर्दै कोरोनिल नामक औषधी सार्वजनिक गरेको छ । उक्त औषधी भारतमा प्रयोग गरेर हेरिएको पनि कम्पनीले...
« अघिल्ला 123456… 182 पछिल्ला »